महामारीको बेलामा पनि तिब्र बिकाश गर्ने विश्वकै पहिलो ब्यक्ति मै हु : केपि ओली - nepal day
प्रकासन मिति : ६ माघ २०७८, बिहीबार २०:१६
देश बिकास भएको राजाको पालामा होईन हाम्रो पालामा भएकाे हो : केपी अाेली
खुसिको खबर: अब नेपालमा सुरुभयो ४५ वर्षबाट बृद्धभत्ता (सहि वा गलत ?)
एमालेमा इश्वर र शंकर झनै शक्तिशाली, उपाध्यक्ष र सचिवको हैसियत केन्द्रीय सदस्य बराबर !
देउवा, प्रचण्ड -माधव सबै मिलेर आए हुन्छ, एमाले एक्लै काफी छ :शंकर पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (जनवादी) बीच पार्टी एकता हुने भएको छ ।…
काठमाडौं, । अहिले देशमा राजा चाहियो भनेर सम्पुर्ण आम नेपाली जनता सडक मै उत्रेका छन…
काठमाडौं, । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न…
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले एमाले छाड्ने मनस्थिति बनाएको समाचार बाहिरिएको छ ।…
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई झन् बढी शक्तिशाली…